`Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> Maxaan sameyaa haddii gaarigeyga layga jiito? - City of Minneapolis
Haddii gaarigaaga lagaaga jiitay sabab ah inaad jebisay sharciyada gaari-dhigista jidka ee Birmadka Barafka Minneapolis, waxaa la dhigayaa goobta la yiraahdo Minneapolis Impound Lot. The Minneapolis Impound Lot
Wac (612) 673-5777 waxaadna u sheegtaa nambarka laysinka gaarigaaga si lagu ogaado haddii gaarigaaga la soo jiitay.
Lacag ujra ah ayaa lagugu dallacayaa maalin kasta ee meesha lagu hayo. Filo inaad bixisid lacagta haddii gaarigaaga la so jiitay:
$34 Tigidka Ganaxa Birmadka Barafka
$138 Ujrada Jiidista
Lacaga maalin kasta lagugu dallaco kuna xiran marka qofka gaariga iska leh uu soo doonto gaariga la jiitay.
Rugta lagu hayo gaariga la soo jiitay waxey aqbalayaan lacag caddaan ah, jeegagga shaqsiyeed, iyo kaararka la xoqo ee VISA iyo MasterCard.
Waxaa kaloo lagaa rabaa inaad horey u soo qaadatid aqbaar dheeraad ah sida waraaqo caadeyanaya inaad lahaanshaha iyo waraaqo aqoonsi si aad gaarigaaga ugala baxdid rugta lagau hayo gawaarida la soo jiiday. Aqbaar dheeraad ah eeg shabakada internetka ee Minneapolis Impound Lot Web